Ny Valosoa, 01/07/2017. Raharaha Claudine-Rajao-SMM, Fanondranana olona an-tsokosoko, Vidim-piainana… | Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris
← Ny Valosoa, 01/07/2017. Paris, Rajaonarimampianina mampiesona ny mpanao gazety. Video.
Mme Claudine Razaimamonjy au summum de son art : « Dis moi qui tu fréquentes et je te dirais… ». GValosoa. →
Mitaingina ny ady amin’ny kolikoly nataon’ ny BIANCO indray
Mbola voaporofo indray ankehitriny fa tsy manan-katoraka ny filoha Hery Rajaonarimampianina amin’ny fitondràna ity firenena ity . Nilaza ity farany tamin’ny fampahalalambaovao tany Frantsa fa mifofotra amin’ny ady amin’ny kolikoly i Madagasikara ankehitriny , hita hoy izy ny ezaka natao tato ho ato mikasika io . Tonga dia takatry ny rehetra eto ny tian’ny filohampirenena ambara , mitaingina ny zava-bitan’ny rantsana iray miady amin’ny kolikoly eto Madagasikara ny BIANCO izy tamin’ny nisamboran’ity sampana ity ka nampidirana amponja vonjimaika ny mpandraharaha goavana Claudine Razaimamonjy, akaiky ny fiondràna HVM , mpanolotsaina manokan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina .
Misaotisaoty mila dera indray fa hoe tsy mifidy tavan’olona fa na akaiky ny fitondràna aza dia ampidirina amponja . Etsy andaniny anefa tsy mahasahy milaza ny tena marina amin’ny fiarovana an’i Claudine Razaimamonjy fa miafina ao ambadiky ny fitenenana efa mankadilo sofina hoe ‘ aleo hanao ny asany ny fitsaràna ‘. Tsy fantatry ny filoha Hery Rajaonarimampianina angaha fa nanao valandresaka ho an’ny mpanao gazety tamin’ny 10 ora sy sasany alina anie ny minisitry ny fitsaràna Charles Andriamiseza nanameloka ny BIANCO fa tsy ara-dalàna ny fetr’andro nitazomana an’i Claudine Razaimamonjy teny Ambohibao . Nisy angamba ny tsindry natao tamin’ity rantsana miady amin’ny kolikoly ity nandritra ny nitazonana ny mpamatsy vola ny HVM fa hentitra ny tompon’andraikitra voalohany tao amin’ny BIANCO ka tsy nandaitra izany , ny vahaolana haingana dia ny fanaovana sarimihetsika sisa izay tsy misy fahataperany hatramin’izay nahavoatazona ny namany .
Nentina tany Maorisy fa hoe tsy misy fitsaboana sahaza azy eto Madagasikara , andro vitsy anefa dia niverina teto Madagasikara indray satria tsy tafapetraka tany amin’ity nosy rahavavy ity noho ny tsindry nahazo ny fitondràna Maorisianina tany antoerana sy taty ivelany . Io raharaha Claudine Razaimamonjy io ihany koa araka ny fanambaràna nataon’ny sendikan’ny mpitsara SMM dia tsy tokony ity mpandraharaha ity irery no tokony hiditra am-ponja mikasika ny raharaha naha voarohirohy azy fa mbola maro ny mpitondra ambony tokony ho voasaringotra tamin’ny firaisana tsikombakomba taminy . Tsy ho vitan’i Claudine A&C irery io raharaha kolikoly nataony io , koa aiza izay ambaran’ny filoha Hery Rajaonarimampianina mikasika izany , sa mijanona ho resabe fotsiny izany ady amin’ny kolikoly imasoan’ny fanjakàna izany.
Ankoatra izany , misy ireo manana raharaha ara-pitsaràna mpandraharaha goavana akaiky ny fitondràna voasazy hiditra any amponja , tsy izany anefa no mitranga fa miriorio soa aman-tsara eto amin’ny firenena izy io , vao mainka aza misehoseho mitondra fikambanana . Ny BIANCO moa efa namoaka fanambaràna fa mbola mitohy ny fanadihadiana mikasika io olona io . Raha ny alahelon’ny fitondràna HVM tarihan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina dia tsy sitrapony ary tsy fidiny an’ireto farany ny ampiditra amponja vonjimaika an’i Claudine Razaimamonjy namana akaiky ny fitondràna , ary nahavita be tamin’ny fandaniana ny filoha Hery Rajaonarimampianina hitondra ny firenena , fa tsy afaka miverin-dalana izy ireo , lasa raharaham-pirenana tsy fidiny ity resaka ity noho ny adalàn’ny fitondràna ihany tany amboalohany , ka tsy afaka miverin-dalana intsony izy ireo .
Ka resabe fotsiny ny filazàn’ny filoha tany Paris fa miezaka mafy amin’ny ady amin’ny kolikoly ny firenena Malagasy , raha tsy nanao ny asany am-pahamarinana ny BIANCO tsy ho azo mihintsy ny trondro vaventy toa an-dry Claudine Razaimamonjy mpanolotsaina manokan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina, sady isan’ny mpanorina ny antoko HVM.
Fanondranana olona an-tsokosoko. Sokajiana ho firenena araha-maso akaiky sokajy 2 i Madagasikara
Tatitra iraisam-pirenena momba ny fanondranana olona an-tsokosoko avy eto Madagasikara no solon’ny Tafatafa eto amin’ny gazetinao androany:
Ny Fitondrana Malagasy dia tsy mahafeno tanteraka ireo fenitra farafahakeliny ho an’ny famongorana ny fanondranana olona an-tsokosoko; na izany aza anefa, dia misy ny ezaka hanatrarana izany tanjona izany izy. Nasehon’ny fitondrana izany ezaka izany hatramin’ny nivoahan’ny tatitra farany tamin’ny alàlan’ny fampivelarana ny tambazotra fiarovana ny ankizy sy tamin’ny fandraisana fepetra tany amin’ny faritra hiadiana amin’ny fanondranana zaza tsy ampy taona hararaotina ara-nofo.
Na izany aza anefa, dia tsy naneho ezaka bebe kokoa ny fitondrana raha ampitahaina amin’ny fe-potoana notombanana teo aloha. Nahenan’ny fitondrana ny ezaka hitoriana sy hiampangana ireo nahiana ho nanondrana olona an-tsokosoko. Na dia teo aza ny fitombon’ny tatitra nilaza fa nisy tompon’andraikitra niray tsikombakomba nandritra ny taona, dia tsy nisy ny manam-pahefana nadinina tamin’izany, ary tsy nisy ny fanadihadiana natao mikasika ny tatitra nilaza fa nisy manam-pahefana nanamora ny fanondranana zaza tsy ampy taona hararaotina ara-nofo. Mbola tsy ampy hatrany ny lamina ofisialy nananan’ny fitondrana hamantarana haingana ireo niharan’ny fanondranana olona an-tsokosoko teo anivon’ireo mponina marefo, tsy nisy ny raharaha natolotra tsy tapaka ho an’ireo rehetra niharan’ny fanondranana, ary tsy nisy ezaka nataony hanairana bebe kokoa ny sain’ny besinimaro.
Tsy nomen’ny fitondrana loharanom-bola ny Birao Nasionaly miady amin’ny Fanondranana olona an-tsokosoko, ilay birao voatendry hitarika ny ezaka manerana ny firenena, hanaitra ny sain’ny mponina, na hampihatra ilay laminasam-pirenena. Noho izany dia nivarina ho ao amin’ny Lisitra arahi-maso Sokajy 2 i Madagasikara amin’izay fanondranana olona an-tsokosoko izay.
Endrika isehoan’ny fanondranana olona an-tsokosoko
Araka ny tatitra navoaka tato anatin’ny dimy taona, Madagasikara dia firenena iaviana sy ahatongavan’ireo lehilahy, vehivavy ary ankizy iharan’ny asa an-tery, ary ireo vehivavy sy ankizy iharan’ny fanondranana olona an-tsokosoko hararaotina ara-nofo. Misy ireo zaza Malagasy, indrindra ireo avy any ambanivohitra sy avy amin’ny faritra morontsiraka ary ireo fianakaviana sahirana ao an-drenivohitra, izay iharan’ny fanararaotana amin’ny fivarotan-tena, asa an-trano, asa an-tery eo amin’ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany, jono ary fiompiana sy fambolena manerana ny nosy.
Raha ny ankamaroan’ny tranga-na fanararaotana mamoa-fady mihatra amin’ny ankizy dia mandray anjara ny havana, saingy eo ihany koa ireo mpandraharaha amin’ny fizahan-tany, mpitondra fiara karetsaka, ary ireo olon-dehibe ao anatin’io sehatra io izay mirotsaka ho mpanelanelana. Misy ireo ankizivavy tsy ampy taona noraisina an-tsokosoko ho mpandroso sakafo na mpanotra ao Antananarivo avy eo niharan’ny fanararaotana amin’ny fanondranana zaza tsy ampy taona hararaotina ara-nofo. Araka ny tatitra dia amin’ny toerana mahasarika ny mpizahatany sy manodidina ireo faritra fitrandrahana harena an-kibon’ny tany, na ara-dalàna io na tsy ara-dalàna, no tena mihanaka ny fanararaotana mamoa-fady atao amin’ny ankizy. Nilaza taloha ireo fikambanana tsy miankina fa misy manam-pahefana miray tsikombakomba amin’ny famoahana kara-panondro sandoka hanamorana ny fanondranana zaza tsy ampy taona hararaotina ara-nofo eto Madagasikara sy vehivavy Malagasy noterena hanao asa an-trano any ivelany.
Miha-mahazo vahana ihany koa ny fivarotan-tena mahakasika ireo zazalahy tsy ampy taona araka ireo tatitra hafa taloha. Mbola olana hatrany ny fampiasana zaza tsy ampy taona any an-trano ary misy ny birao tsy ara-dalàna mpamatsy mpiasa mandray zaza tsy ampy taona hiasa an-trano, izay araraotin’ny lehilahy Malagasy ampiharana fanondranana zaza tsy ampy taona hararaotina ara-nofo, raha vahiny Frantsay sy Italianina no tena betsaka amin’ireo mpizahatany mamoa-fady amin’ny zaza tsy ampy taona, ary vitsivitsy ihany ny vahiny Tandrefana hafa sy Komorianina manao izany. Maro ireo vehivavy Malagasy miasa an-trano any Liban, Koweit sy Arabie Saoudite, ary mitatitra ny gazety fa maro ireo birao tsy ara-dalàna mpandefa mpiasa mbola manandrana miala amin’ilay lalàna tamin’ny taona 2013 mandrara ny fandefasana mpiasa any Moyen Orient ka mandefa azy ireny mandalo any Maurice, Seychelles, Comores ary Kenya ka mampiasa visa ho an’ny mpizahatany.
Misy ihany koa ireo olon-tsotra mitonona ho avy amina orinasa mpandray mpiasa tsy ara-dalàna no mandray vehivavy Malagasy amin’ny alàlan’ny karapanondro sandoka ka alefany any Chine hiharan’ny asa an-tery sy amidy ho lasa vadin’olona. Misy koa tatitra milaza fa misy lehilahy Malagasy iharan’ny asa an-tery amin’ny sehatry ny asa an-trano sy ny sehatry ny tao-trano any Moyen Orient, ary mety hisy koa voatery manao asa an-trano any Chine. Vao tsy ela izay dia nitombo ny isan’ireo mpiasa mila ravin’ahitra iharan’ny fanerena an-kolaka na asaina mandoa kolikoly, izay matetika vokatry ny fampiatoana ny fanomezana alàlana iero birao mpandefa mpiasa. Misy tatitra milaza fa misy mpiasa Malagasy any Liban niharan’ny endrika fanararaotana samihafa ataon’ny mpampiasa azy, toy ny fampijaliana ara-batana sy ny figizana ny pasipaorony, izay mety ho anisan’ny antony nihazonana azy ireny am-ponja.
Mijaly ny vahoaka na inona lazain’ny filoha Hery R. amin’ny Fotoambita
Miakabidy ny vidin’entana eny an-tsena toy ny kafe, mofogasy, vary, saribao sy ny saran-dalana amin’ny fiara mpitatitra, izay tsy manao saran-dalana tapa-dalana 200Ariary intsony nanomboka efa ho herinandro vitsivitsy izao, fa 300Ariary avokoa ny lalana somary akaiky. Na inona lazain’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina amin’ny fandaharany Fotoambita dia mihasarotra ny fiainan’ny vahoaka Malagasy. Na dia efa namidy tamin’ny vahiny ny tany sy orinasampanjakana malagasy lehibe ary efa nandray ny frankofonia sy fivoriambe afrikanina sy lazaina fa tafaverina eo anivon’ny firaisambem-pirenena erantany i Madagasikara dia tsy misy vokany amin’ny fampakarana ny fari-piainan’ny vahoaka ireny.
Vao mainka manjaka ny kolikoly sy ny tsy fandriampahalemana eto amintsika amin’izao fotoana satria lasa ny mpitondra no filamatra amin’izany raha ny resaka kolikoly, ny tsy fandriampahalemana dia tsy voafehin’ny mpitondra mihitsy na inona lazaina na inona, na hisy aza ny tompon’andraikitra hoesorina ato ho ato araka ny nolazain’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina sy ny Praiministra Mahafaly Olivier. Ankoatra izany, vitsy ny tokantrano nanangana saina tamin’ny fetim-pirenena teo iny satria tsy nahatsiaro ambiansy fety ny rehetra hatreto fa variana amin’ny adimpiainana mihamafy. Ny nijery fety maimaimpoana toy ny nisy tao Antsonjombe tamin’ny alatsinainin’ny Pentekoty na Carnaval de Madagascar teny Analakely sisa no mampialavoly ny Malagasy efa tena trotraky ny fiainana ny vahoaka noho ny fahaizan’ny mpitondra ankehitriny no anton’izany rehetra izany.
Hangorom-potsy i Mahamasina ny 8 jolay izao
Mizotra tsara araka ny tokony ho izy amin’izao fotoana izao ny fikarakarana ny fankalazana ny faha-15 taonan’ny antoko Tiako i Madagasikara na TIM, hatao etsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina ny sabotsy 8 jolay ho avy izao. Ho an’ny eto an-drenivohitra sy ny manodidina miomana fatratra amin’izany andro lehibe izay ny avy amin’ity antoko ity sy ireo mpomba ny Filoha Marc Ravalomanana rehetra tsy ankanavaka. Anio sabotsy amin’ny 11 ora antoandro, hisy ny fivoriana ho fanomanana izany hatao etsy amin’ny kianjan’ny Finoana Magro Behoririka. Anio sabotsy ihany, etsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina, hisy ny famerenana Zumba lehibe hataon’ireo tanora avy amin’ny Boriborintany 6 eto an-drenivohitra. Ho an’ny avy amin’ny Faritra 22, araka ny efa notaterina teto tamin’ny laharan’ny gazety farany teo, efa somebiseby ho avy eto an-drenivohitra koa ny solontena maro avy amin’nhy faritra 22, tsy avy amin’ny antoko TIM ihany, fa ireo mpomba an’i Dada sy ny olon-tsotra ihany koa dia fantatra fa ho avy eto an-drenivohitra amin’ny sabotsy heriny anio io.
Anisan’ny tarigetra amin’io hetsika lehibe io ny fampivondronana, karazan’ny fampihavanam-pirenena ataon’ny antoko TIM satria misokatra ho an’ny rehetra tsy ankanavaka io lanonana io, na ho an’ny antoko politika rehetra, satria dia nasaina avokoa na ny HVM, na ny MAPAR, na ny antoko hafa rehetra koa, ireo TIM nisintaka koa dia anisan’ny nasaina,… Fotoam-pivavahana iraisam-pinoana, rindran-kira hataon’ireo tarika malaza, rindran-kira ara-pilazantsara manomboka amin’ny 7 ora maraina ka hatramin’ny 5 ora hariva no hetsika hatao mandritra io andro io. Nanambara sahady ny mpikarakara fa hangorom-potsy i Mahamasina amin’ny sabotsy 8 jolay io.
HO AN`INGAHY MPIZARA VOLA
Ny mizara vola hatrany , izay no hany tetikady
Sady fomba mahazatra ny olona tahaka anao ?
Dia milamina ny saina fa tsy miomana hitady
Vahaolana maharitra na koa fomba vaovao ?
Dia io mizara vola foana ho famenoana ny kianja,
Sady hoentina miseho fa mbola mamin`ny vahoaka ?
Etsy andaniny kanefa natahorana ny vanja
Sy ny zavatra hafahafa mety hatsipy ka hipoaka ?
Dia mizara , dia mizara, toy ny hoe malala-tanana,
Kanjo fanampena-maso ireo mahantra faraidiny ?
Efa lasa fomban-drazana mialoha ny fifidianana
Ny mamory ireo vahoaka sy mividy ny safidiny ?
Dia mizara ihany koa ka tonga hatreny Tsimbazaza
Ny fanaovan-kolikoly sy ny fizarà-malety ?
Adivarotra efatrefatra , izany izao no toa malaza,
Ka tsy hisy zava-banona , ny tsy mety lasa mety.
Vola avy aiza anefa ireny ? tsotra ihany raha ambara:
Famarotan-tanindrazana , izay no tena fiaviany .
Ry vahoaka mandiniha , mankaiza re `ty Gasikara.
Moa ve lavaka mangitsoka no avela hitodiany ?
DADAN`i ZINA (30-06-17)
Galerie | Cet article, publié dans Non classé, est tagué Claudine Razaimamonjy, Hery Rajaonarimampianina, Marc Ravalomanana, Ny Valosoa 1 Juillet, SMM, TIM. Ajoutez ce permalien à vos favoris.